သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေကြမ်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေကြမ်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ
လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူအများ သိရှိလေ့လာအကြံပြုနိုင် ရေးအတွက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်္ဘာလ ၉ ရက်နေ့က ပြည်တော်စုလွှတ်တော်က နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများမှတဆင့် ဖေါ်ပြလိုက်သည်။
အခန်း ၇ ခန်းပါ ဥပဒေကြမ်းတွင် ပုဒ်မ ၂၇ ခု ပါသည့်အနက် ပုဒ်မ ၄ အရ “သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာ တွင် နိုင်ငံတကာ စီချိန်စံညွှန်းများနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရန် အတွက် ကုလသမဂ္ဂ စာရင်းအင်းကော်မရှင်က ကမ္ဘာတဝှန်း အတည်ပြု သတ်မှတ်ထားသောမူများ၊ အကြံပြုချက်များ အား ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရမည်” ဟု ပါရှိသည်။
ထိုဥပဒေအရ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရန်အတွက် ဗဟို သန်းခေါင်စာရင်း ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်ပြီး သမ္မတ က ခန့်အပ်မည့် ဒု-သမ္မတ တဦးက နာယက လုပ်ကာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒု-ဝန်ကြီးက အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုမှတဆင့် တိုင်း၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်နှင့် ရပ်/ကျေး ကော်မရှင် များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ တာဝန်ခံအရာရှိအဖြစ်မူ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးအား ခန့်အပ်မည်ဖြစ်သည်။
၃၁ နှစ်အကြာမှ ပြန်လည်ကောက်ခံသည့် မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ သန်းခေါင်စာရင်းကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် အပြီး ထုတ်ပြန်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ က လွှတ်တော်တွင် ပြောဆိုထားသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များမှာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအကြား တခုနှင့်တခု တူညီမှု မရှိခဲ့ကြပေ။ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ကိန်းဂဏန်းအရ ၄၈ သန်းဟု ခန့်မှန်းပြီး အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က သန်း ၆ဝ ဟု ခန့်မှန်းကာ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ကြီးကမူ ၆၄ သန်းဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။
This entry was posted on December 18, 2012, in ဥပဒေ, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မင်းပြား ပိုက်သည်ကျေးရွာရှိ မွတ်စလင်များ ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားခွင့်မရ
လူ့အခွင့်အရေးနေ့တွင် ဦးအောင်မင်း လက်ရှိအခြေအနေ ရှင်းပြ →